Ogaden News Agency (ONA) – Dhalinyaradii Hawaarinta (Liyu Police) deegaanka Ogaadeenia oo ku soo qulqulaya ..
Dhalinyaradii Hawaarinta (Liyu Police) deegaanka Ogaadeenia oo ku soo qulqulaya ..
Liyu Police-ka (Hawaarin ) oo Gumaystaha Itoobiya u taba-baray in uu ku gumaado shacabka aan hubaysnayn ee maatida ah kuwaasoo tirada ku buuxi loogu laayo dhammaan Gobalada iyo Degmooyinka Ogadenia iyaga oo ugu mar-marsada in ay u yihiin Taageerayaal Jabhadda wadaniga Xoreynta Ogaadeenia (JWXO) haseyeeshee. Dadkan ay Hawaarinta gumaadaan oo aan wax ba ka la socon is hardinta –Gumaysta-ha iyo Gumaysidiidka – ayaa u badan Carruur, hooyooyin iyo wayeel biri’ma gaydo ah.
Is ka hor imaadkan iyo baxsadka Liyu-boolsika ayaa imanaya ka dib markii ay dhalin badan oo uu ku adeeganayay gumaysiga Itoobiya iswaydiiyeen danta ugu jirta in ay laayaan eheladooda oo aan waxba galabsan taasoy arkeen inay macnaheeda tahay in dhulka dadka ku dhaqan la mooraduugo, iyadoo looga dan leeyahay in la dajiyo Qoomiyado kale oo laga keenayo dhulka sare ee Itoobiya.
Haddii uu qof ka mid ah Ciidanka Liyu Police-ka ka hadlo dilka, dhaca, kufsiga, iyo tacadiga lagula kacayo shacabka waxa lagu eedeeyaa in uu wax kale aaminsan yahay ama uu yahay xag-jir, waxaana dhacda in la khaarajiyo.
Jabhadda wadaniga Xoraynta Ogadenia (JWXO) ayaa horay u soo saartay bayaan (Halkan ka akhri) ay ugu baaqayso dhalinta la majara-habaabiyay in ay is kaga soo baxaan xumaanta ay faraha kula jiraan iyo dadkooda ay laynayaan, inta ay goori goor tahay; taas badalkeedana ay helayaan in loo fidiyo saamaxaad.
Haddaba, waxa maal-mihii ugu danbeeyay is ka soo daba dhacayay dhalinyaro ka soo goosanaya hawaarinta markay u adkaysan waayeen nolol xumida iyo caburinta ka jirta Ciidamada Liyu Police dhaxdiisa, kuwaas oo sheegay in ay hadda waxii ka danbeeya go’aan koodu yahay in ay difaacaan xuquuqda Aadanaha shacabkooda isla markaasna nolol iyo magan-galyo siyaasadeed waydiistaan Hay’adaha Xuquuqul insaanka iyo kuwa bini’aadnimoda.
Mudo haatan laga joogo hal bil waxaa ka soo goostay maxaysatada Hawaarin ( LIYU POLICE) dhalinyaro koox ah oo ka tirsanaa, kuwaa soo eegga ku sugan xero qaxooti oo kutaala mid kamid ah dalalka dariska ah. Mar aan la kulmay dhalintan ayaa waxaan kala sheekeeystay xaaladaha ka jira deegaanka Ogaadeenia. Ugu horeyn waxaan wareystay mid kamid ah dhalintaa oo lagu magacaabo FAYSAL AXMED MAXAMED GEEDI oo Numberka Taysahara-hiisa yahay 56, wuxuuna ka mid ahaa Regimentiga 25-aad.
Wuxuuna yidhi Faysal sidan;
“Waxaan ka soo jeedaa Degmada Garbo ee gobalka Fiiq. Waxaanan ka mid ahaa Ciidanka Liyu police-ka gaar ahaan regimentiga- 25aad. Ka hor inta aanan noqon Liyu-police, waxa la igu xidhay Jeel Ogaden aniga oo la igu soo eedeeyay in aan ahay taageere (ONLF), balse waxaan ahaa nin shacah ah oo rayid ah oo jooga degmadii uu ku dhashay. Waxa la yidhi qofkii Liyu Police noqda waa la sii daynayaa. Sidaas ayaanan uga mid noqday Liyu Police-ka, si aan u badbaadiyo nafteeyda.”
Dad badan ayaa marka ay maqlaan Jeelka wayn ee loo yaqaan Jeel Ogaden waxaa xasuustooda ku soo dhacaysa, dan-qasho xanuun badan, jidh-dil, kufsi, jiif xumo, cunto darro iyo wali ba cadaab daran oo lagula kaco dad badan oo aan wax ba galabsan. Faysal oo hadalka sii wata waxa uu yidhi;
“Xabsiga Jeel Ogaadeen noloshiisu aad iyo aad ayay u liidataa; nolol bini’aadmigu ku noolaan karo ma aha. Jeel Ogaadeen umada ku xidhan waxa ay gaareysaa 5,000 oo qof waxa ayna ku xaraysan yihiin xayn daab yar oo ayna ku noolaan Karin 500 oo qof. Dadka Xabsiga ku jira waxa ay ku nool yihiin, nolol aad u liidata. Markasta waxa ka dilaaca daacuun. Waa dad ul iyo jidhdil lala dul taagan yahay, qasabna lagaga keenayo in uu sheegto qof wal ba inuu (ONLF) ka mid ahaa, ku aan ahayn iyo ku ahaa ba! Sidii loo garaacayo ayuu qasab ku sheeganayaa qof kasta. Marka aad haa dhahdo ka bacdi baa lagu daynayaa.”
Ciidamadan Liyu Police-ka ah oo da’doodu tahay dhalin yar aad u da’yar is la markaana, lagu qas-bo in ay lugeeyaan maalmo badan, ayaa waxa ay noqdaan naf la caari iska laaya cid wal ba oo ay arkaanba. Isaga oo ka waramaya Faysal arintaa waxa uu yidhi;
“Waxa aan ka hawl-gali jiray gobalada dhammaantood, ilaa gobalka Fiiq, Gobalka Qoraxay, Gobalka Wardheer, Gobalka Jigjiga, Gobalka Dhagax-buur. 5taa Gobal ayaan ka hawl-gali jiray si toos ah anigu. Laakiin Saldhigaygu waxa uu ahaa Degmada Jigjiga, hase-yeeshee, waxa aan ahaa nin wareega ah oo Gobaladaas oo dhan lug ku mara.”
Wuxuu intaa raaciyay; “Run ahaantii, deegaanka dhammaantiiba waxa uu ku jiraa waa xasuuq, ba’ iyo balan-bal dhammaantii ba. Dadku goormaa lagu dili, goormaa laguu imanayaa ayuu ku jiraa oo qof kasta dhuunta unbuu hayaa. Dadku marka kalsooniba ma haystaan, Ciidanku tacadiyo aad iyo aad u daran ayay u gaystaan dadka rayidka ah ee dhulka ku nool iyaga oo ay ciidanku kala duwan yihiin. Ciidanka Liyu Police-Ka , Ciidanka Dawlada Itoobiya iyo ciidanka loo yaqaan Maleeshiyaadka , qolo wal ba dadka ayay gumaadaysaa.”
Waxa kale oo uu ka xogwaramay Faysal gumaadkii Wardheer ka dhacay oo loo gaystay 11 ruux oo aroos joogay. Magaalada Gari-go’an oo qoys 5 qof ka koobnaa dab la qabadsiiyay, 90 qof oo lagu dilay Bu’ladari oo Gobalka Jigjiga ka tirsan, Oday 80 sano jir ah oo lagu dilay Daaru-Salaam oo Degmada Garbo ka tirsan iyo Gumaadkii ugu danbeeyay ee Galaalshe ka dhacay.
Wax la soo koobi karo ma aha Gumaadka ka jira Ogaadeenia intaan maqlay, balse hadaan ka hadlo inta aan indhahayga ku arkay waxay ahaayeen kuwan;
– 20/2012, Daaru-Salaam oo ka tirsan Degmada Garbo waxaa lagu dilay oday 80 sano jir ah oo ka mid ahaa maamulka Magaalada, ka dib markii lagu soo eedeeyay in uu Taageere u yahay ONLF.
– 12/2011, Geri-go’an iyo meel u dhaxaysa Garbo Qoys 5 qof ka kooban oo 3 Ciyaal ah, Aabohood iyo Hooyadood ayaa dab la qabadsiiyay oo kobtaas ay ku bas-beeleen. Gabadh gashaanti ah oo reerka joogtayna ay Liyu Police-ku soo kaxaysteen waxana amarka reerka lagu laayay iska lahaa Shi’alaqe Sheekh Mukhtaar Maxamed Suubane.
– 08/2012,Waxa Iskudhuunley, oo Wardheer ka tirsan dad aroos ah oo xafladii tumanaya lagu edeeyay Ururka ONLF,11 qof oo ay ku jiraan, Caruuskii, Caruusadii, Manxiiskii iyo manxiisadii ayaa baas la mariyay Amarkaasna waxaa iska lahaa Shi’alaqe Sheekh Mukhtaar Maxamed Suubane.
– 08-09/2012, Bu’ladari oo Gobalka Jigjiga ka tirsan waxa is ku laayay Ciidanka ONLF iyo Liyu Police-ka, markii ay ciidanka ONLF meeshii ka tageen, waxa meesha yimid Ciidankii Liyu Police-ka oo dadkii ra’yidka ahaa ee meesha ku noolaa inta ay is ku soo ururiyeen ayay 90 qof goobtii ku dileen, waxa dilkaas amarkiisa lahaa Shi’alaqe Malaajee .
– 02/2013, Galaalshe waxa ka dhacay dagaal lagu hoobtay oo 90 ka mid ah ciidanka Liyuu Police-ka lagaga dilay. Ka dib markii ay 2ba ciidan kalkaas ka kala tageeen Ciidanka Liyu police-ka ayaa isku habar-wacday iyaga oo dilaya qof wal ba oo ay indhaha saaraan ba, waxaayna halkaa ku dileen dad lagu qiyaasi karo 300 oo qof.
Xaaladaha bi’ni aadaminimo ee ka jira guud ahaan Ogadenia ayaa ah mid aad looga naxo iyada ooy nooga warameen qaar badan oo ka soo goostay Ciidamada Liyu Police- ka sida uu Faysal Axmed Maxamed Geedi inooga waramay, iyagoo cadeeyay in dadka Ogadenia loogu gaysto dhibaatooyin aad u fara-badan reero badana la mooraduugay, dumarkana lagu fara-xumeeyo, raggana lagu xidho- xidho jidh dil badanna loogu gaysto. Guud ahaan shacabka Soomaalida Ogadenia ayaa ka firxanaya gumaadka ka socda dalkooda, iyada oo aan loo ogolayn in saxaafada Caalamka iyo Hay’adaha gar-gaarku si xor ah u galaan Ogadenia si ay indhahooda ugu arkaan dilka, dhaca, kufsiga, iyo boobka ay ku hayaan ciidamada Itoobiya iyo dhidid-dhowrkooda Hawaarin.
Waxaa noo socon doona wareysiyada aan la yeelanay dhalinyaradaa ka soo cararay Hawaarinta, anagoo idiin soo gudbin doona waliba wareysiyadaa oo filimaan ah.
Waxaa diyaariyay: Ahmad Cabdi/Freelance Writer